I-Take Of Semalt Expert Ku-Google Analytics Spam - Ungayisusa kanjani
Ugaxekile wogaxekile we-Google Analytics nogaxekile ube yizingqinamba zangempela kumabhizinisi asebenzisa amapulatifomu e-intanethi. Abakwa-Spammers basebenzisa ngokunenzuzo abanikazi bewebhu ngokuvakashela amawebhusayithi abo futhi baqhubekela phambili kumasayithi e-malware. Ukuze usinde ku ukumaketha kwe-digital , amafemu kanye nezinhlangano kufanele zihlanze zonke izivakashi ezikhohlisayo ezivela emibikweni yabo yewebhusayithi. Ukubhekana ne-malware, igciwane le-trojan, ne-Google Analytics ugaxekile kunzima kunalokho okuvame ukukhonjiswa.
Ukukhipha ugaxekile wokudluliselwa koghost, ukugaxekile kokudlulisa okungenaghost, nokugaxekile kwe-Google Analytics kuhlanganisa ukudala ukuhlunga nokuqapha ngokususa wonke amafayela anonya nedatha kusuka kumbiko wakho. Amathuluzi amaningana asetshenziselwe ukusiza amaklayenti ukuba asuse i-malware ne-spam kalula.
Igor Gamanenko, oyedwa ochwepheshe abahola phambili Semalt , uchaza isiqondiso sendlela yokususa ogaxekile ku-Google Analytics kusuka emibikweni yakho.
1. Ukubeka ukubukwa okuningi kwe-Google Analytics
Ukwakha ukubukwa kokubili kwe-Google Analytics ukuze kube nokubukwa okungenani kwemibono emithathu. I-Google Analytics entsha inombono owodwa, okwakhiwe ngokuzenzakalelayo. Ukuba necebo lokulondoloza lwedatha yakho kuvunyelwe ukuba idatha yakho ithinteke emva kokusebenzisa izinguquko ezintsha.
Yenza umbono wakho ozenzakalelayo ube umbono wakho oyinhloko. Qamba kabusha yonke idatha yewebhusayithi kule mbono ukuze uhlunge futhi ususe ugaxekile we-Google Analytics, igciwane le-Trojan, nezinsongo ze-malware. Ukubukwa okungaphezulu okudalwe kufanele kuqukethe ukubuka kokuhlola kanye nombono ongeyena. Setha umbono wakho ongcolile ngaphandle kokuhlunga noma izinguquko, kanye nombono wakho wokuhlola izinguquko ezenziwe kuwebhusayithi yakho ngaphambi kokwenza ushintsho ekubukeni okuzenzakalelayo.
2. Thola ugaxekile ngama-hostnames avumelekile
Ukuthola ugaxekile we-Google Analytics nge-hostnames kulula kakhulu. Igama lomphathi limelela igama lewebhusayithi yakho. Ukuze uhlunge imilayezo engalungile, faka igama lomnikazi we-legit embikweni wakho. Ukuphumula kwama-hostname kunqatshelwe ngokuzenzekelayo Kodwa-ke, kunconywa ukugwema ukuhlunga ithrafikhi langempela ngoba kungalimaza kakhulu i-website yakho.
Dala esinye isihlungi ekubukeni kwakho kwe-Google Analytics equkethe ithrafikhi kuma-hostnames ecacisiwe. Qala ngokusebenzisa ukubuka kwakho kwe-Test bese uvumele ukuthi igijime izinsuku ezingaphezu kwezinhlanu. Hlola ukuthengiselana ukuze uqinisekise ukuthi idatha iyahlala efana kusukela uhlunga imoto engafanele. Dala esinye isihlungi ekubukweni kwakho okuyinhloko bese ufaka zonke izizinda ezivumelekile esihlungi.
3. Hlunga ugaxekile wokudlulisela umoya
Umbiko wakho omkhulu we-Google Analytics uqukethe ugaxekile wokudlulisela ukuthutha kanye nezinye i-malware. Ukugaxekile kogaxekile kusebenza ukuthumela izivakashi ezikhohlisayo kuwebhusayithi yakho. Ukuze uhlunge ugaxekile wokudluliselwa kusuka emibikweni yakho, yenza izihlungi ezimbili bese wengeza konke ukudluliselwa kokufa okutholakala ohlwini lwakho. Hlala uqale ngombono wakho wokuhlola ukuze uhlole ukuthi usebenze kanjani, bese usebenzise isihlungi esiyinhloko.
4. Ukukhishwa kweBots
I-Google Analytics isebenze kumasu azokhipha wonke ama-bots aziwayo ngokuzenzakalelayo kusuka emibikweni yakho. Dala ukubukwa kokuhlola kanye nombono omkhulu wokuhlunga amabhubhu.
5. Yenza ingxenye yokuhlunga ugaxekile
I-Malware ne-Trojan virus ingabacasula kakhulu uma ingena kuwebhusayithi yakho. Yenza izihlungi ezintsha ezizokhipha wonke ugaxekile wokudluliselwa kweghost kusuka kwidatha yakho esebenzayo. Dala ingxenye ukuze uhlole umlando wakho futhi ungafaki konke ugaxekile wokudlulisa okuvela efonini yakho.
Ugaxekile wokudlulisa futhi i-Google Analytics spam ingozi yangempela kubanikazi bewebhu. Ukusakazwa kogaxekile kuye kwakha imoto engafanele kumawebhusayithi wangempela ngenjongo eyodwa yokuthola ukubandakanya kanye ne-traffic langempela kumawebhusayithi abo amabi. I-virus efana neTrojan ne-malware iye yasetshenziswa kabanzi ngabagaxekile ukudala ithrafikhi yangempela. Landela izinyathelo eziqanjwe ngenhla ukukhipha ukugaxekile kogaxekile nogaxekile we-Google Analytics kusuka kumbiko wakho.